Ifektri Ejwayelekile Yesitimela Sokuhlola | I-China Common Rail Test Bench Abakhiqizi, Abahlinzeki
bosch 0445110646 i-rai ejwayelekile ...
CAT yasekuqaleni 326-4700 uphethiloli ...
Original Denso Pressure Lim ...
I-Orignal HP4 Fuel Injection ...
Original Okokhelekayo injector 0950 ...
I-Original Bosch control valv ...
BOSCH yangempela udizili futha 0 ...
I-DELPHI ipompo yedizili yangempela ...
DELPHI udizili injec ...
I-DELPHI iphethiloli yangempela ...
CAT yasekuqaleni 320-0680 uphethiloli ...
320D ukulawula valve 326-4700 ...
Original HP0 uphethiloli futha pres ...
CRS-708C ejwayelekile wesitimela test ebhentshini
I-CRS-708C ibhentshi lokuhlola iyisetshenziswa esikhethekile sokuhlola ukusebenza komfutho ophakeme wesitimela ojwayelekile kanye ne-injector, ingahlola ipompo ejwayelekile yesitimela, i-injector ye-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO ne-piezo injector. Ihlola umjovo wesitimela ojwayelekile kanye nepompo ngenzwa yokugeleza ngesilinganiso esiqondile futhi esizinzile. Ingangeza uhlelo lwe-EUI / i-EUP nohlelo lwe-HEUI.
CRS-728C ejwayelekile wesitimela test ebhentshini
I-CRS-728C ibhentshi lokuhlola iyithuluzi elikhethekile lokuhlola ukusebenza komfutho ophakeme wesitimela ojwayelekile kanye ne-injector, ingahlola ipompo ejwayelekile yesitimela, i-injector ye-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO ne-piezo injector.
Ingangeza uhlelo lokuhlola lwe-EUI / EUP ne-CAT C7 C9, isivivinyo sempompo ejwayelekile ye-CAT 320C.
isivivinyo VP44 VP37 RED4
CRS-825C ezivamile wesitimela test ebhentshini
I-CRS-825C test bench iyithuluzi elikhethekile lokuhlola ukusebenza komfutho ophakeme wesitimela ojwayelekile kanye ne-injector, ingahlola ipompo ejwayelekile yesitimela, i-injector ye-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO ne-piezo injector. Ingangeza uhlelo lokuhlola lwe-EUI / EUP ne-CAT C7 C9, isivivinyo sempompo ejwayelekile ye-CAT 320C.
Ibhentshi lokuhlola le-EUI-200
I-EUI-200 iyisetshenziswa esikhethekile sokuhlola ukusebenza kwe-EUI / EUP, ayidingi enye imishini, ingashayela i-cambox ukuthi isebenze ngqo.
Ibhentshi lokuhlola le-EUI-EUP
Umhloli we-EUI / EUP udinga ukufakwa ebhentshini lokuhlola, futhi uwoyela wokuhlola unikezwa yibhentshi lokuhlola nalo.
HU-200 test bench, EUI-EUP & HEUI C7 C9 test test bench
HU-200 test bench yokuhlola i-EUI-EUP & HEUI C7 C9 system test bench ndawonye. ingahlola i-EUI / i-EUP ye-BOSCH, i-CUMMINS, i-DELPHI, i-CAT, i-VOLVO, i-SCNIA, njll futhi ihlole ne-Caterpillar C7 / C9 HEUI ejwayelekile ye-injector yesitimela.
CRS-206C ovamile wesitimela injector umhloli
ingahlola ujantshi ojwayelekile we-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO kanye ne-piezo injector.
I-functin ye-BIP, umsebenzi wekhodi we-QR uyatholakala.
Uhlelo olusebenzayo lweWindows, uhlelo lokusebenza lweLinux zombili ziyatholakala.
CRS-308C ovamile wesitimela injector umhloli
ingahlola ujantshi ojwayelekile wesitimela we-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO. kanye ne-piezo injector.
Umsebenzi we-BIP, ikhodi ye-QR iyatholakala.
CRS-328C ejwayelekile wesitimela test ebhentshini kanye HEUI C7 C9 test ebhentshini
ingahlola ujantshi ojwayelekile wesitimela we-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO, futhi ingahlola i-C7 / C9 HEUI umfutholuketshezi wesitimela ojwayelekile.
CAT actuate futha test imishini
I-HEUI-200 CAT C7 C9 ibhentshi lokuhlola
I-HEUI-200 iyisetshenziswa esikhethekile sokuhlola ukusebenza kwe-injector ye-HEUI
ingahlola ujantshi ojwayelekile wesitimela we-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO, kanye ne-PIEZO injector.
CRS-200C ezivamile wesitimela injector test ebhentshini
ingahlola ujantshi ojwayelekile wesitimela we-BOSCH, ISIEMENS, i-DELPHI ne-DENSO kanye ne-piezo injector nge-flow meter sensor.
CRS-718C ejwayelekile wesitimela test ebhentshini
CRS-718C test bench is a special device to test the performance of high-pressure common rail pump and injector, it can test common rail pump, injector of BOSCH, SIEMENS, DELPHI and DENSO and piezo injector. Ihlola umjovo wesitimela ojwayelekile kanye nepompo ngenzwa yokugeleza ngesilinganiso esiqondile futhi esizinzile. Futhi ngalesi sizathu, futhi ingafakwa ngohlelo lokuhlola lwe-EUI / EUP lokuzikhethela, uhlelo lokuhlola lwe-CAT HEUI.